cabdalla xasan khaliif maxamuud, gargaarka uu u baahan yahay.. Guji.....
GABAR SOOMAALIYEED OO QALLIIN DEGDEG AH U BAAHAN
Codsi naga soo gaarey dadweyne farabadan awgeed ayaan u qarinay cawrada, balse maadaama aad xaqiiqada nala aragteen fadlan ka qayb qaata caawinaada, ujeedadanadu waxay ahayd in aan dadweynaha tusno xaqiiqada rasmiga ah ee xishoodka lahayn. gabadhan yar waa dhiban tahay gargaarkiina ayeyna u baahan tahay.
Waxaan dhammaan halkan idiinku soo tebineynaa gabar yar oo Soomaaliyeed oo gargaar degdeg ah u baahan.
Gabadhan yar oo magaceeda layiraahdo Maryan Yuusuf Maxamed, da'deeduna tahay 15-bilood waxaa haysata dhibaato aad u weyn taas oo ah in aysan si caadi ah kaadidu uga imanayn, balse ay iska socoto kaadida oo aysan xakamayn karayn, iyo ayada oo sida sawirka ka muuqata aad uga jiran xubnaha kaadi mareenka, waxayna u baahan tahay qalliin degdeg ah.
Sida ku cad warbixinta dhakhaatiirta gabadhan yar ku arkay Muqdisho, waxay u baahan tahay dhakhaatiir takhasus dheeraad ah u leh qalliinka xubnaha kaadi mareenka. Qoyskeeduna ma awoodaan kharashaka ku baxaaya qalliinkeeda. Sidaas daraadeed ayaan halkan idiinku soo gudbiney si aad uga qayb qaadataan taageerada gabadhan yar.
Warqaddii dhakhaatiirta ka eeg halkan... Guji...
Wixii mucaawino ah waxaa lagu hagaajin karaa:
XUSUUS: Sawirka gabadha yar waxaan wajiga uga qarinay si aan u xafidno aqoonsigeeda, maadaama xubnaha muuqda ay yihiin cawr, xubnahaas sababta loo muujiyeyna ay tahay mid la xiriirta xaqiiqo tusida qof kasta oo ka qayb qaadanaya gargaarka gabadhan yar.
Dhakhaatiirta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed waxaa sugaaya in ay baaritaan cilmiyeed ku sameeyaan waxyaabaha sababaya xanuunada aan Soomaaliya horay loogu arkijirin ee hadda kusoo badanaya. Su'aal ay dadbadani isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay, sunta lagu duugey Soomaaliya, (sida ay caddeysay cilmibaaristii Dr. Bashiir Sh. Maxamed) , imisa raad ah ayey ku leedahay xanuunada kusoo batay Soomaaliya. Jawaabteedu waxay sugeysaa Soomaalida aqoonta uleh cilmigaas...... Guji....